Wasiir C/raxmaan Xoosh iyo saraakiil sare oo maanta gaaray magaalada Baydhabo (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wasiir C/raxmaan Xoosh iyo saraakiil sare oo maanta gaaray magaalada Baydhabo (SAWIRO)
Wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane C/raxmaan Xoosh Jibriil iyo saraakiil sare oo katirsan wasaaradda ayaa maanta gaaray magaalada Baydhabo ee caasimadda KMG ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed.
Xubnaha wasiirka safarka ku wehliya ayaa waxaa kamid ah aggaasimaha guud ee wasaaradda Mudane Maxamed Abuukar Zubeyr iyo 3 kamid ah la-taliyayaasha wasaaradda.
Ugu horeyn, wafdiga uu hogaaminayay wasiirka ayaa shir la qaatay ku-simaha madaxweynaha Koonfur Galbeed ahna wasiirka dhaqan celinta maleeshiyaadka iyo hub-ka-dhigista Mudane Xasan Maxamed Xuseen iyo wasiirka arrimaha dastuurka Koonfur Galbeed Mudane C/qaadir Cali Caraale.
Intaa kadib, AVV Cabdi Xoosh oo warfidiyeenka kula hadlay xarunta madaxtooyada Koonfur Galbeed ayaa ka warbixiyay ujeedaada ay daarantahay safarka wafdiga uu hogaaminayo.
“Waxa aan Baydhabo u nimid in madaxda iyo shacabka Koonfur Galbeed aan ka talo gelino qorshaha guud ee hannaanka dib-u-eegista dastuurka ee ay wasaaradda diyaarineyso; innagu waxaa inaga go’an in aan si daah-furnaan ah ugu shaqeeyno dadka Soomaaliyeed waxa aana kulamo wadatashi ah la yeellan doonnaa dhamaaan qeybaha kala duwan ee bulshada Baydhabo” Ayuu yiri wasiir C/raxmaan Xoosh.
Ugu damabeyn, safar hawleedkaan ayaa kamid ah kuwo ay wasaaradda ku gaarsiineyso kullamada wadatashiga dhamaan gobolada dalka, si diyaarinta qorshaha guud ee hanaanka dib u eegsita dastuurka uu u noqdo mid ka qeyb-galkiisu loo dhanyahay.